ओलीकाे अवार्डले देशमा गाली, संसारभर ताली | Tungoon
ओलीकाे अवार्डले देशमा गाली, संसारभर ताली
Posted by Admin | Dec 3, 2018 | मुख्य समाचार |0|
काठमाडौं । एसिया प्यासिफिक समिट सकिएको छ । समिटमा सरकारले दुईवटा काममा ‘ब्याक’ हुनु प¥यो । एउटा समिट ‘आयोजक’ पक्षबाट सरकार हट्यो । अर्को समिटमा आउनेहरुको सुरक्षार्थ यातायात व्यवस्थित गर्न जोरबिजोर प्रणाली लागू । यसमा पनि नागरिकले सास्ती पाएको विरोधको स्वर आएपछि सरकारले तत्कालै ‘जोर बिजोर’ हटायो । अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी ओली जनताको भावना बुझ्छन् र तत्काल निर्णय लिन सक्छन् ।
समिट सकिँदै गर्दा आलोचनाको निलकण्ठ बनाइएका ओलीलाई आयोजक युनिभर्सल पिस फाउण्डेसनले १ लाख डलरको ‘लिडरसिप एण्ड गुड गभर्मेन्स अवार्ड’ प्रदान गरेको छ । अवार्डमा सुशासन र नेतृत्व क्षमतामा ओलीको नाम जोडिएको छ । सरकार चलाएको नौ महिना नपुग्दै र आर्थिक वर्षपछिको तीन महिना बित्दैमा ‘केही गरेन’ भन्ने आलोचना चलिरहँदा ओलीको नाम विश्वका विभिन्न देशमा भने ‘राम्रो’सँग सञ्चार भयो । ४५ देशका सहभागी रहेको सम्मेलनमा ओलीलाई दिइएको पुरस्कार आमनेपालीको पनि ‘गौरव’को विषय हो । अरु कुनै प्रधानमन्त्रीले यस्तो पुरस्कार पाएका थिएनन् । आलोचना सहेर धैर्य रहँदा विश्वले पत्याउँदोरहेछ भन्ने सन्देश पनि हो यो ।
धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा सबै धर्मावलम्वीले कार्यक्रम गर्न पाउँछन् । अझ नेपालको कुरा गर्ने हो भने त धार्मिक सहिष्णुता भएको मुलुक । त्यसैले हिन्दूले चाहेका बेला हिन्दूका र अरु धर्मावलम्वीले चाहेका बेला अरु कार्यक्रममा कुनै पनि समूह तगारो बन्नु हुँदैन । धार्मिक सहिष्णुता भनिए पनि यसपटक केही विरोध भयो । सरकारलाई चौतर्फी हमला थियो । राम्रो काममा पनि नराम्रो तर्कमा जनतालाई भ्रमित पार्ने अभियान कहाँबाट प्रायोजित छ ? खोजीको विषय हो ।
यही बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुरस्कार नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर बालबालिका र युवाको हितमा खर्च गर्ने घोषणा गरेका छन । यसले बालबालिका र युवाका पक्षमा केही आसा जाग्नेछ । धर्म प्रचारको मुद्दा जोडेर ओली आशीष लिने भनेर जोडिएको हल्ला पनि यो पुरस्कारसँगै खण्डन भएको छ । ओली नेतृत्वमा कुटिल छन् । ओली सुशासनमा कठोर छन् ।
आइतबार मात्रै सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कांग्रेसको पनि हो भनेर प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताइरहँदा त्यही कार्यक्रम शुरुवात गर्ने ओलीलाई सुशासन र नेतृत्व विकासमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अवार्ड दिइनु चानचुने होइन । शर्माले नै चार महिनाअघि नै यो सरकार ‘जष्ट पास’ भनेका थिए । कामै गर्न नपाउँदा त सरकार जस्ट पास भइसकेको थियो भने यसपटक ‘जस्ट पास’को कार्यक्रम कांग्रेसको पनि योजना भनिरहँदा ओलीले भने विश्वजगतमा सुशासन र नेतृत्व विकासमा अब्बल सावित गरेका छन् । आलोचना गर्ने गरिरहन्छन्, ओलीले फेरि आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्थापित गरेका छन् । अर्को कुरा, केही नगर्ने भन्दा त ‘जस्ट पास’ पनि पुरस्कारको हकदार हुँदोरहेछ नि !
Previousअब शिक्षक र अभियानकर्ताका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाइनुपर्ने
Nextविमानस्थल सुरक्षा पुनः ‘मेट्रो’लाई
सशस्त्रका सबै गुल्मपतिदेखि बाहिनीपतिसम्म राजधानीमा
भन्सार छल्न सहयोग गर्ने हवल्दारलाई भ्रष्टाचार मुद्धा
तेस्रो कोरोना संक्रमितको मृत्यु
दश वर्षमा धेरै बदलिए तर यी कुरा किन बदलिएनन् ?